Cabdikaafi Macalin Xasan oo ku guuleystay Kursigii u horeeyay ee Aqalka sare K/Galbeed | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Doorashada xubnaha Musharaxiinta u taagan aqalka sare ee matalaya Koofur Galbeed ayaa ka socota magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, iyadoo qofkii u horeeyay ee ku guuleystay kursiga Aqalka sare uu noqday Cabdikaafi Macalin Xasan.
Xildhibaan Cabdikaafi Macalin Xasan ayaa ka adkaaday Musharax kale oo la taramayay, kaasoo lagu magacaabo Cali Cabdullaahi Isaaq.
Xildhibaanada Baarlamaanka Koofur Galbeed ayaa labada Musharax u kala codeeyay, waxaana Cabdikaafi Macalin Xasan uu helay 87 cod, halka Cali Cabdullaahi Isaaq uu helay 42 cod.
Illaa 16 Musharax ayaa u taagan aqalka sare, waxaana laga sugayaa 8 xubnood oo Maamulka Koofur Galbeed u matali doona Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Xubnaha Musharaxiinta ee Aqalka sare ayaa waxaa horay u soo gudbiyay Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la sheego inuu taageersan yahay 8 ka mid ah xubnaha la filayo inay ku soo baxaan Aqalka sare ee Koofur Galbeed.
Maamulka Galmudug ayaa noqday maamulkii u horeeyay ee soo gudbiya xubnaha Aqalka sare u matalaya, kuwaasoo ka kooban 8 xubnood, waxaa la sugayaa in xubnaha ka soo jeeda Somaliand inay soo gudbiyaan xubnaha 11-ka xubnood ee u matalaya Aqalka sare, inkastoo ay diidan yihiin, waxaa kaloo la sugayaa in Maamulka dhowaan la doortay ee Hirshabeelle inuu soo gudbiyo liiska Musharaxiinta u taagan aqalka sare.